Qalabka IPhone | Wararka IPhone
In Actualidad iPhone ayaan ku tusi doonaa qalabka ugu fiican taas oo loo sameeyay taleefanka Apple. Toddobaad kasta waxaad la kulmi doontaa noocyo badan oo dabool ah si aad uga ilaaliso iPhone-ka kuuskuusyada iyo xagashada, cod-bixiyeyaasha kaas oo aad ku dhagaysan kartid muusikada aad ugu jeceshahay, guriga ama baabuurta oo aad ku dul nasan karto boosteejada, fiilooyinka gawaarida, gacmaha-ka-madaxbannaan ama alaabta carruurtu ku ciyaarto ee laga xakameyn karo iPhone-ka. Waxaan sidoo kale kuu keenaynaa kan ugu fiican heshiisyada qalabka si aad u iibsato Danab fiilooyin danab ah iyo alaabada kale qiimaha ugu fiican
by louis padilla samee horas 2 .
Marar badan ayaan ka hadalnay Sonos, oo ah soo saaraha caanka ah ee ku hadla afka ku xiran oo leh hab la mid ah Apple….
Maanta, Khamiis, nooc cusub oo AirTag firmware ah ayaa hadda la sii daayay. Sida caadiga ah ee shirkadda,…